8 - BookCubicle
သူတို့၏ ကယ်တင်ရှင်များသည် အသံတစ်စက်မှ မထွက်ကြပါ။ သူတို့သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ လှုပ်ရှားကြခြင်းဖြစ်သည်။ အပြာ၊ အဖြူနှင့် ငွေရောင်များ ရောလှုပ်နေသော လူအုပ်ကြီးက မည်သည့်နေရာကမှန်းမသိဘဲ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ရင်းနှီးနေသော အသံဖြစ်သည့် မြားတစ်စင်း၏ လေဟုန်ခွင်းလိုက်သံကို Durotan ကြားလိုက်ရသည်။ မျက်စိတစ်မှိတ်မျှကြာသော် ဘီလူး၏ အော်ဟစ်သံက ဒေါသကြောင့်မဟုတ်တော့ဘဲ နာကျင်မှုဖြင့် ပြည့်နှက်သွားလေသည်။ ထိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသည့် အရောင်ဖျော့ဖျော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်တွင် မြား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ စူးစိုက်ပြန့်ကျဲနေလေသည်။ ဘီလူးကြီးမှာ နာကျင်ကာ အကြောများ တုံ့ဆိုင်း၍ သေအံ့မူမူး ဖြစ်နေ၏။ ၎င်းက အော်ဟစ်လိုက်ပြီး သူ့အရေပြားပေါ်မှာ နာကျင်စေသည့်အရာများကို ဖယ်ချရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
ကြည်လင်သော အသံတစ်သံ ထွက်ပေါ်လာ၏။ ဘာသာစကားကို နားမလည်သော်ငြား ထိုအသံကိုကြညးရသောအခါ စကားလုံးများ၏ စွမ်းအားကြီးမှုကို Durotan ခံစားသိရှိလိုက်ရသဖြင့် ကြက်သီးများထကာ စပ်ဖျဥ်းဖျဥ်းဖြစ်သွားလေသည်။ ရုတ်တရက်ပင် မိုးကောင်းကင်ပေါ်၌ လျှပ်စီးများဖြင့် ပြည့်နှက်သွားသည်။ သို့သော် ထိုလျှပ်စီးများသည် Durotan မြင်ဖူးသည့် နတ်ဆရာများ၏ ပင့်ဖိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သော လျှပ်စီးများနှင့် မတူဘဲ ကွဲပြားနေလေ၏။ အပြာရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့် ငွေရောင် စွမ်းအင်များက ဘီလူးကြီး၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် တဖျစ်ဖျစ် တဖြောက်ဖြောက် မြည်နေကာ လှည့်လည်နေပြီး နောက်ဆုံးတွင် သူ့အပေါ်၌ ပိုက်ကွန်သဖွယ် ဖြစ်တည်ကာ ပိတ်လိုက်သည်။ မကောင်းဆိုးဝါးသတ္တဝါကြီးက ထပ်မံအော်ဟစ်လိုက်ပြီး လဲကျသွားသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး တုန်ခါသွားလေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်များတွင် သတ္တုရည်စိမ်ထားသကဲ့ကို တစ်ကိုယ်လုံး ဖုံးလွှမ်းနေကာ မှော်စွမ်းအင်များ၏ အေးမြသော အရောင်အဝါများ​ဖြင့် အလင်းပြန်နေသောကြောင့် Durotan မျက်စိများကိုပင် ကျိန်းလာစေသော Draenei များသည် ယခုတွင် လဲကျနေသော ဘီလူးကြီးထံမှ ဆင်းသက်လိုက်ကြသည်။ သူတို့၏ ဓားများက အရောင်များ လက်နေသည်။ အာဏာကြီးသော စကားများနှင့် အမိန့်ပေးသံများ ပိုမို ကျယ်လောင်လာသည်။ Durotan သည် မျက်စိရှေ့တွင် မြင်နေရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ရူးမသွားခင် သူ့မျက်လုံးများကို အတင်း ပိတ်ချလိုက်ရသည်။
နောက်ဆုံးတွင်မူ အသံများ တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ Durotan မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်မိသောအခါ ဘီလူးကြီးမှာ သေဆုံးသွားပြီ​ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘီလူးကြီး၏ မျက်လုံးများမှာ ပြူးကျယ်ကာ စူးစိုက်ကြည့်လျက်ပင်ရှိသေးသည်။ ကွဲနေသော နှုတ်ခမ်းမှ လျှာက ထွက်နေလျက်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာမူ အနီရောင်သွေးများနှင့် အမည်းရောင် မီးလောင်ရာများ ဖုံးလွှမ်းနေလေသည်။
တိတ်ဆိတ်မှုမှာ ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် Durotan သည် သူ့အသက်ရှူသံမညီမညာကိုရော Orgrim အသက်ရှူသံကိုပါ ပြန်ကြားနေရ၏။ သူတို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ အခုလေးတွင် သူတို့မျက်စိရှေ့၌ ဖြစ်သွားသည့် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အသက်ရှူမှားကာ ကြက်သေသေနေကြလေ၏။
သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး Draenei တွေကို ကျိန်းသေပေါက်မြင်ဖူးကြပါပေသည်။ သို့သော် အဝေးကနေသာ မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။ Draenei များသည် ရံဖန်ရံခါ Orc အဖွဲ့များထံလာရောက်၍ သူတို့ သေချာပြုလုပ်ထားသော လက်မှု ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ လက်နက်များနှင့် ကျောက်များမှ ထွင်းထုထားသော အလှတင်ပစ္စည်းများအား တောကောင်များ၏ အရေခွံဖြင့် လုပ်ထားသော ခြုံစောင်ထူထူများ၊ အရောင်အသွေးစုံလင်သော စောင်များနှင့် Orc တို့ မြေကြီးနှင့် ကျောက်တို့မှကောက်နုတ်ရွေးချယ်ထားသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတို့နှင့် လဲလှယ် ကုန်သွယ်ကူးသန်းကြသည်။ ထိုအချိန်များသည် အဖွဲ့ဝင်တို့ စိတ်ဝင်စားကြသည့် အချိန်ဖြစ်သော်လည်း လဲလှယ်ခြင်းမှာ နာရီပိုင်းမျှသာ ကြာမြင့်ကြသည်။ အပြာရောင် အသားအရေနှင့် စကားကို နူးညံ့ငြင်သာစွာ ပြောတတ်ကြပြီး ခြောက်ခြားဖွယ် ညှို့ဓာတ်တစ်မျိုးရှိသော Draenei တို့မှာ ခင်ခင်မင်မင် နေရန် စိတ်ကူးရှိပုံမရပေ။ ထို့ပြင် မည်သည့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကမှလည်း သူတို့ကို လာရောက် နေထိုင်အပန်းဖြေရန် မဖိတ်ခေါ်ဖူးချေ။ သူတို့ကြားဆက်ဆံရေးမှာ ဖော်ရွေသယောင်ရှိသော်လည်း အဖက်မလုပ်ဘဲ တသီးတခြားနေကြသည်။ ထိုထဲတွင်ပါဝင်သူတိုင်းကလည်း ထိုနည်းအတိုင်း အဆင်ပြေကြသည့်ပုံပေါ်လေသည်။
ယခုတွင်မူ ထို လုံးဝမထင်မှတ်ဘဲရောက်ရှိလာသော အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်က Durotan ရှေ့မှောက်သို့ ခြေလှမ်းကျဲကျဲဖြင့် လျှောက်လာလေသည်။ သူလျှောက်လာသော မြေကြီးကို ကြည့်လိုက်သည့်အခါ Durotan သည် ယခင်သူတို့ကို အဝေးမှ မြင်ဖူးစဥ်က သတိမထားမိလိုက်သည့် အရာတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်။
သူတို့၏ ခြေထောက်များသည် ခန္ဓာကိုယ်အရှေ့ပိုင်းကနေ မြေကြီးထိ တစ်ဖြောင့်တည်းသွားကြခြင်း မဟုတ်ပါပေ။ သူတို့ခြေထောက်များမှာ နောက်သို့ ကွေးနေကြသည်မှာ talbuk အကောင်၏ ခြေထောက်များကဲ့သို့ပင်။ အဆုံးတွင် သတ္တုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည် ခွါများရှိသည်။ နောက်ပြီးတော့ ဟုတ်ပါသည်.... ရှေ့မှနောက်သို့ တရွှမ်းရွှမ်းမြည်အောင် ခါယမ်းနေသည့်အရာမှာ ထူထဲပြီး အမွွေးအမျှင်မရှိသည့် အမြှီးတစ်ချောင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာပါသည်။ ယခုမူ ထို ခွါနှင့်အမြှီးတို့၏ ပိုင်ရှင်မှာ သူ့ထံ ကိုင်းညွတ်နေကာ သန်မာသော အပြာရောင် လက်ကို ကမ်းနေလေသည်။ Durotan က မျက်တောင်ခတ်လိုက်သည်။ ထူးဆန်းသော ခွါနှင့် ဖွတ်လိုလို မြွေ​လိုလို အမြီးကို လိုတာထက်ပို၍ စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်မပါသော သူ့ခြေထောက်များထံ အကြည့်ပြန်ရောက်သွားသည်။ ခေါင်းပေါ်တွင် ထူးဆန်းသည့် သတ္တုရည်တစ်မျိုးက သံချပ်ကာဝတ်ဆင်ထားသလို တည်ရှိနေသော မျက်နှာတစ်ခုကို သူမော့ကြည့်လိုက်သည်။ နက်မှောင်သော ဆံပင်နှင့် မုတ်ဆိတ်များက အရောင်စုံသည့် သံချပ်ကာပေါ်တွင် ဝဲကျနေသည်။ စူးရှကာ တောက်ပသည့် မျက်လုံးအစုံကမူ ဆောင်းရာသီ ရေကန်၏ အရောင်ကဲ့သို့ပင်။
" မင်း ထိခိုက်ထားတာလား ? "
ထို Draenei က Orc မိခင် ဘုံဘာသာစကားဖြင့် တုံ့ဆိုင်းတုံ့ဆိုင်းပြောသည်။ သူတို့ ဘာသာစကားကို ပြောဆိုရာတွင် အသံထွက်ရ ခက်ခဲနေသည်မှာ သိသာလှသည်။
" ငါ့မာနပဲ ထိခိုက်တာ " Orgrim က သူ့အဖွဲ့ ဒေသိယစကားဖြင့် ခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်သည်ကို Durotan ကြားလိုက်ရသည်။ သူလည်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်နေလေသည်။ ထို Draenei သည် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး အသက်ကို ကယ်လိုက်သည်မှာ သိသာထင်ရှားနေပြီး ထိုအတွက်လည်း သူ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် သူတို့သည် မာန်တက်နေသည့် Orc ငယ်လေး နှစ်ယောက် အန္တရာယ်မှ သေပြေးရှင်ပြေး ပြေးနေရသည်ကို မြင်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအန္တရာယ်ကလည်း တကယ်သေလောက်ပါသည်။ ထိုမတန်တဆ ကြီးမားလွန်းသည့် တင်းပုတ်နှင့် တစ်ချက်မျှ အထုခံရရုံနှင့်ပင် သူရော Orgrim ပါ စိစိညက်ကြေသွားနိုင်ပါသည် သို့ပေသိ..... ။
Orgrim ပြောလိုက်သည့် စကားကို Draenei များ နားလည်သည် မလည်သည်ကို မသိသော်ငြား ထိုသူ ပြုံးစိစိဖြစ်သွားသည်ဟု Durotan ထင်မိသည်။ Draenei က ကောင်းကင်သို့ မော့ကြည့်လိုက်ရာ နေဝင်တော့မည့်ဖြစ်ကြောင်း Durotan တုန်လှုန်ခြောက်ခြားစွာ သိလိုက်ရသည်။
" မင်းတို့ နှစ်ယောက် အိမ်ကနေ လျှောက်သွားတာ တော်တော်ဝေးသွားပြီ။ နေလည်း ဝင်တော့မယ် " သူကပြောသည်။
" မင်းတို့က ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ"
" ကျွန်တော်က Durotan၊ Frostwolf အဖွဲ့က ။ သူကတော့ Blackrock အဖွဲ့က Orgrim"
Draenei က အံ့သြသွားပုံပင်။
" အဖွဲ့မတူဘူးလား? မင်းတို့ အိမ်တွေကနေ ဒီလေါက်ဝေးတဲ့အထိ ရောက်လာတာ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိန်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်နေကြလို့လား?"
Durotan နှင့် Orgrim တို့ အကြည့်ချင်း ဖလှယ်လိုက်ကြသည်။
" ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်။ ... မဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူး" Durotan က ပြောလိုက်သည်။
Draenei က မျက်လုံးများ ပြူးကျယ်သွားသည်။
" သူငယ်ချင်းတွေ ..? အဖွဲ့မတူဘဲနဲ့လေ? "
Orgrim က ခေါင်းညိမ့်လိုက်သည်။
"ဟုတ်တယ် " သူက ခုခံသလိုမျိုး ထပ်ပြောလိုက်သည်။
" ထုံးစံတော့ သိပ်မရှိဘူး ဒါပေမယ့် တားမြစ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး"
Draenei က ခေါင်းညှိမ့်လိုက်သော်လည်း ဆက်လက် အံ့သြနေဟန် ရှိသည်။ သူက သူတို့နှစ်ယောက်ကို ခဏ အကဲခတ်လိုက်ပြီး သူနှင့် အဖော်ပါလာသူ နှစ်ယောက်ဘက်ကိုလှည့်ကာ သူတို့ ဘာသာစကားနှင့် တစ်ခုခုပြောလိုက်သည်။ ထိုဘာသာစကားမှာ ဂီတသံကဲ့သို့ နက်နဲသိမ်မွေ့သည်ဟု Durotan ထင်သည်။ ကျောက်တုံးများပေါ်မှ ဖြတ်၍ ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့စီးဆင်းသော မြစ်တစ်စင်း၏ ရေကျသံလိုမျိုး၊ ငှက်တစ်ကောင်၏ တေးဆိုသံလိုမျိုး ။ ထို Draenei နှစ်ယောက်က သူ့စကားကို စူးစူးစိုက်စိုက်နားထောင်ကြပြီး ခေါင်းညှိမ့်လိုက်ကြသည်။ တစ်ယောက်က သူ့ခါးပတ်တွင် ချိတ်ထသည့် ရေဘူးကို ဖြုတ်ကာ အားရပါးရသောက်လိုက်ပြီး talbuk တစ်ကောင်၏ ခြေလှမ်းကဲ့သို့ ပြေပျစ် မြန်ဆန်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် Frostwolf အဖွဲ့တည်ရှိရာ အနောက်တောင်အရပ်သို့ ဦးတည်၍ ပြေးထွက်သွားလေသည်။ ဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်း Blackrock အဖွဲ့တည်ရှိရာဘက်သို့ ပြေးထွက်သွားလေတော့၏။